Mpikambana LCN amin'ity volana ity : Wildlife Conservation Society (WCS) - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Mpikambana LCN amin’ity volana ity : Wildlife Conservation Society (WCS)
Mpikambana LCN amin’ity volana ity : Wildlife Conservation Society (WCS)
By Seheno Corduant on novembre 16, 2018 in Bilaogy
Ny Lemur Conservation Network dia manokana iray volana anehoana ireo asan’ireo mpikambana eo anivon’ny LCN ka manazava amintsika ny fomba ahafahantsika manampy azy ireo amin’ireo ady ataony ho fiarovana ny gidro. Ity volana Novambra ity dia natokana ho an’ny Wildlife Conservation Society (WCS). Ao anatin’ity bilaogy ity, dia niresaka tamin’I Atoa Ando Ramasindraibe izahay, izay tompon’andraikitry ny fifandraisana na spécialiste junior en communication ao amin’ny WCS izay nitantara taminay ireo asa zava-dehibe ataon’ny WCS ary ny fomba ahafahantsika manampy azy.
Mba zarao aminay ny tantara sy ny mombamomban’ny fikambanana
Wildlife Conservation Society dia fikambanana amerikanina izay miasa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny lafin’ ny fiarovana ny harenan-java boahary anivo tany sy any an-dranomasina ary koa ireo izay tontolo maro.
Ny taona 1993 no nitsangana ny WCS Madagascar program ka niasa ho fiarovana maharitra ny harenan-java boahary tokana ananan’I Madagasikara ka nifantoka tamin’ireo fiarovana ireo tany midadasika sy velan-dranomasina ny asany amin’izany.
Efa nanomboka tamin’ny taona 2003 no niasa tany Makira ny WCS ka nanangana ny alan-javaboahary arovana any Makira. Io toerana io dia tantanina amin’ny alalàn’ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny fikambanana mponina eny ifotony izay miisa 75 izay miandraikitra ny fitantanana sy ny fiarovana ilay antsoina hoe “green belt” manodidina ny Parka. Mamolavola fikarohana miainga amin’ny asan’ny mponina eny ifotony, fiarovana eny ifotony ihany koa WCS ary fandaharan’asa fanofanana eny ifotony eny amin’ny velaran-dranomasina telo izy ireo : any Toliary Atsimo-andrefana, Baie d’Antongile any Avaratra atsinanana ary Nosy Be any Avaratra andrefana.
Aiza no misy ny fikambanana ary inona avy ireo asa?
Any Antananarivo, renivohitr’i Madagasikara no misy an’ny WCS Madagascar. Fa misy birao WCS avokoa ireo toerana izay iasanay.
Inona ireo karazana gidro iasanareo?
WCS dia miasa ho an’ny fiarovana ny Parka any Makira izay misy karazana gidro 17. Anisan’izany ny Simpona fotsy (Propithecus candidus) izay tsy hita afa-tsy any amin’ny faritra avaratra atsinanan’I Madagasikara, Varinaina (Varecia rubra) izay hita manodidina ny Baie d’Antongile irery ihany, Ny varikandana (Varecia variegata subcincta), ary ireo babakoto (Indri indri). Eo am bavan’ny faharinganana ireo karazana gidro ireo rah any UICN no jerena.
Inona avy ireo asa atao izay manampy amin’ny fiarovana ireo gidro sy ireo asa hafa?
WCS dia manampy amin’ny fiarovana ny gidro amin’ny alalàn’ny fanankambanana ireo fanatsarana ny fanaraha-maso ireo fanamafisana ny lalàna sy ireo fampiromboroboina ireo asa mahasolo ny asa fanimbana ala toy ny fanoloana ireo fitadiavana otrik’aina na proteina ary ny fanentanana maro isan-karazany. Noho izany, misy hatrany ireo fanaraha-maso matetika sy asa fanaraha-maso akaiky atao amin’ny alalàn’ny fampiasana ny SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) izay ampiasaina amin’ny asa fanaraha-maso ho fanamafisana ireo lalàna. Izany no atao dia ny mba ampahafantarana ireo fanapahan-kevitra raisina mikasika ny fiarovana ireo gidro iasana ireo. Misy ihany ko any ady atao amin’ny fihenan’ny velaran’ny ala amin’ny alalàn’ny famerenena ny ala fonenan’ireo gidro ary fampitomboana ny fampifandraisana ireo ala. Mba ho fanoloana ireo asa fanimbana ala ataon’ny mponina, WCS dia manohana azy ireo mba hananana asa fampidiram-bola toy ny fambolem-bary manaraka teknika, ny fiompiana madinika, ny fizahan-tany ary ny maro hafa.
Mampiromborobo ireo orin’asa manana fandaharan’asa amin’ny fiarovana ihany koa WCS. Izany dia zava-dehibe mba ahafahana manohana ireo mponina mba ho tena handray ireo asa ara-toekarena fanoloana ny fanimbana ala, asa maharitra ary tena ahitana vokatra tsara. Ary izany dia mampirisika azy ireo handray andraikitra amin’ny asa fitantanana sy asa fiarovana.
Manana fandaharan’asa fanabeazana ihany koa WCS mba ahampahafantatra sy hampandraisana andraikitra ny olona eny ifotony amin’ny fiarovana. Mijery manokana ireo tanora ny fandaharan’asa amin’ny alalàn’ny fanentanana azy hampiasa ny interneto ka mba hahitany ireo zavatra tsara atao eran’izao tontolo izao. Hanome lanja ireo ankizy no tanjon’ny fandaharan’asa amin’ny alalàn’ny fanentanana eny an-tsekoly ary hanohana ihany koa ireo tanora izay ao anatin’ny fikambanana tanora miaro ny ala mba izy ireo no lasa mpiambina ny tontolo iainana misy azy.
Mampahafantatra ny olana sedraina amin’ny fiarovana tontolo iainana ny WCS amin’ny alalàn’ny fiarovana, fanaovana ireo asa eny ifotony amin’ny fiarovana tontolo iainana, ny fandefasana tantara eny amin’ny radio ho an’ny tanora ary manohana ireo haino aman-jery amin’ny hetsika atao isan-kerinandro, ireo famoahana gazety ary ireo hetsika kolotoraly ary fankalazana atao isan-taona.
Ireo asa famerenana ala ao anatin’ny ala mampifanohy ala 5 ao anatin’ny paraka mba hiarovana ireo ala ary hisian’ny fifanakalozana ireo foto-tarazo amin’ireo zava-maniry.
Fanaraha-maso tsy tapaka ireo ala amin’ny alalàn’ny fisian’ireo mpiambina ala eny ifotony izay mijery ireo mety ho loza ary manentana ireo olona manao izany mba hiala ao amin’ny Parka. Taorian’ny niforonan’I parka dia efa maro ny olona tratra ary nesorina hiala tao amin’ny parka ary fandrika ho an’ny gidro an-jatony no efa nesorina.
Ny ankamaroan’ny sisin’ny parka dia nasiana marika ahafantaran’ireo mponina ny verlan-tany arovana.
An-jatony maro ireo fianakaviana nahazo tohana tamin’ny fambolem-bary mampiasa tekinikam-pambolena vaovao (SRI-SRA) ka nampitombo ny voka-bary ho lasa 4.7 taonina isaky ny hekitara amin’ny ankapobeny fa mety mahatratra folo taonina izany raha 2.5 T monja ny vokatra nasionaly.
Fampiromboroboina ny asa fihariana kakao sy jirofo ho an’ny mponina mba hampiakatra ny fidiram-bolany ary hampihena ny fiankinana amin’ny akora any anaty ala. Misy kaoperativa ho an’ny kakao izay miasa ankehitriny any amin’ny kaominina Voloina ka tafiakatra ho 300 kilao ny voan’ny kakao vokarina isan-taona. Misy kaoperativa iray hafa ihany koa natsangana any Ambanitelo. Ho an’ny fampiromboroboina ny jirofo dia tokatrano 733 no nahazo fitaovana entiny mamokatra zana-jirofo.
Inona avy kosa ireo tanjona sy asa miandry an’i WCS amin’ny ho avy?
Hampihena ireo fanapotehana ala ataon’ny olona mba hiarovana ireo gidro amin’ny fomba maharitra. Heverina hihena betsaka izany ao anatin’ny dimy taona.
Hitandro ny fisian’ny fampifandraisana ireo ala mba hisian’ny fifanakalozana foto-tarazo amin’ny alalàn’ny famerenana ny ala ao amin’ny Paraka.
Heverina ho 1.500 hekitara eo ny ala ho tafaverina. Hampihena ny fiankinan’ireo mponina amin’ny akora hita any anaty ala amin’ny alalàn’ny fanampiana tsy tapaka azy ireo hanana fijariana ara-tsakafo sy ahafahany manana asa fampidiram-bola samihafa.
Mandray olona hiasa an-tsitrapo ve WCS?
Noho tsy fahampiana ireo trai-kefa dia mila olona miasa an-tsitrapo amin’ireto sehatra manaraka ireto izahay: fanabeazana tontolo iainana, fampiromboroboina ny fizahan-tany, fampiasana teknika vaovao amin’ny fambolena sy famokarana, fitadiavana lalam-barotra maharitra, fanisana ireo gidro sy ireo biby rehetra misy ary ny zava-maniry rehetra ao anaty Parka.
Fametrahana ny atao hoe “bio-inventories” na fanisana biolojika ao amin’ny parka
Fampiromboroboina ireo orinasana eny ifotony misahana ny fiarovana
Vakio eto ny mombamomba ny Wildlife Conservation Society eto amin’ny LCN.
Manomeza ho an’ny Wildlife Conservation Society.
Fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany 2018 andiany fahadimy : Resadresaka nifanaovana tamin’i Atoa Heritiana Dieu Donné RANDRIANATOANDRO